65W Super VOOC 2.0 က ဘာကြောင့် OPPO Reno4 Pro ကို ပိုပြီးတောက်ပသွားစေရတာလဲ – MyTech Myanmar
OPPO က Reno4 Pro ကို မိတ်ဆက်တော့ အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ 65W Super VOOC 2.0 ကိုလည်း ထည့်သွင်းပေးလာပါတယ်။ 65W Super VOOC 2.0 ဟာ လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တရားဝင် တင်သွင်းရောင်းချနေတဲ့ Mid-range စမတ်ဖုန်းတွေထဲမှာ အမြန်ဆုံး အားသွင်းစနစ် ဖြစ်လာပါတယ်။ OPPO ဟာ ဒီ 65W နည်းပညာကို Reno Ace နဲ့အတူ ပထမဦးဆုံး ထည့်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီး “ကမ္ဘာ့အမြန်ဆုံး အားသွင်းစနစ် ပါတဲ့ဖုန်း” ဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်ကို ရယူခဲ့ဖူးပါတယ်။ အခုတော့ 65W Super VOOC 2.0 နည်းပညာဟာ Reno4 Pro မှာ ပါလာပြီဆိုတော့ ပိုပြီးလေ့လာကြည့်ချင်စရာ ဖြစ်လာပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဒီဆောင်းပါးဟာ OPPO Fan တွေအနေနဲ့ ဒီအံ့သြစရာနည်းပညာအကြောင်းကို “ဂဃနဏ” သိစေဖို့လည်း ရည်ရွယ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
4000mAh ဘက်ထရီကို ၃၆ မိနစ်နဲ့ အားအပြည့်သွင်းနိုင်တယ်
အရင်ဦးဆုံး ပြောရမှာက 65W အားသွင်းစွမ်းရည်က 4,000mAh ဘက်ထရီကို ၃၆ မိနစ်အတွင်းမှာ အားအပြည့် သွင်းနိုင်တဲ့ အကြောင်းပါ။ ၅ မိနစ်အားသွင်းထားပြီးရင် ၄ နာရီကြာ ဗီဒီယို ကြည့်နိုင်တယ်လို့ OPPO က ဆိုပါတယ်။ ဒါကတကယ်ရောဟုတ်ရဲ့လားလို့မေးရင်၊ လက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်တွေအရ မှန်ကန်နေပြီး၊ ၁၀ မိနစ်အားသွင်းချိန်မှာ ဘက်ထရီရဲ့ ၄၉% အားဝင်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဘယ်လိုနည်းပညာမျိုးမို့လို့ ဒီလောက်မြန်မြန်ဆန်ဆန် အားသွင်းနိုင်ရတာလဲ။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ ဒီနည်းပညာအကြောင်းကို ဆက်ပြီးတင်ပြပေးပါမယ်။
65W Super VOOC 2.0 ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ ?
အားသွင်းမြန်နှုန်းဟာ Electrical power ပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ အားသွင်းနှုန်းကို ပိုမြန်အောင်တိုးချင်တယ်ဆိုရင် ဗို့အား၊ ဒါမှမဟုတ် လျှပ်စီးကြောင်းကို တိုးမြှင့်ရမှာပါ။ အမြန်အားသွင်းစနစ်ကို တီထွင်ရာမှာ ယေဘုယျအားဖြင့် အဓိကနည်းလမ်းနှစ်ခု ရှိပါတယ်။
High-voltage အမြန်အားသွင်းစနစ်ရဲ့ ဗို့အားထုတ်လွှတ်မှုဟာ 5V ထက်ပိုပြီး မြင့်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ပုံမှန်မိုလ်ဘိုင်းဖုန်းဘက်ထရီရဲ့ ခံနိုင်ရည်ထက်လည်း မြင့်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘက်ထရီရှေ့မှာ Step-down converter ဆားကစ်တစ်ခုကို ခံထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ဗို့အားကို လျှော့ချတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှာ အချို့လျှပ်စစ်စွမ်းအင်တွေဟာ အပူအဖြစ်ပြောင်းလဲပြီး စမတ်ဖုန်းထဲကို ဝင်ရောက်သွားတတ်တဲ့ပြဿနာ ရှိပါတယ်။ ဒါဟာ လုံခြုံမှုအတွက် ဖြေရှင်းရမယ့် ပြဿနာပါ။ OPPO ကတော့ Low-voltage-high-current technology ကို သီးသန့်တီထွင်ပြီး တည်ဆောက်ခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒီနည်းပညာက အခု OPPO Reno4 Pro မှာ တွေ့မြင်ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Super VOOC 2.0 ရဲ့ အားသွင်းမြန်နှုန်းဟာ 65 Watts အထိ ဖြစ်ပါတယ်။ မြင်မြင်ချင်းမှာတော့ “high voltage” နဲ့ “high current” ပေါင်းစပ်တဲ့နည်းကို ချဉ်းကပ်ထားတယ်လို့ ထင်ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် OPPO အသုံးပြုတဲ့ နည်းပညာက သပ်သပ်ပါ။ “Series-connected dual-cell fast-charging” ဒီဇိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။ မြင်သာအောင်ပြောရရင်တော့ ဘက်ထရီနှစ်ခုကို ချိတ်ဆက်ထားပြီး 10V ဗို့အားကို 5V စီခွဲလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပါ။ ဒါကြောင့် ဘက်ထရီတစ်ခုစီကို 5V စီ ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒီလိုခွဲလိုက်တဲ့အတွက် အပူဖြစ်စေတဲ့ ဗို့အားလျော့ချရေးဖြစ်စဉ်ကို ဖြတ်သန်းဖို့ မလိုတော့ပါဘူး။
ဒါ့အပြင် ဘက်ထရီပိုင်းမှာလည်း ထုတ်လုပ်မှုနယ်ပယ်အတွင်းက မြင့်မားတဲ့ သတ်မှတ်စံနှုန်းနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ 3C ဘက်ထရီဆဲလ်အဆင့်ကို သုံးထားပါတယ်။ ထုတ်လုပ်မှုကာလတွင်းမှာ ဘက်ထရီနှစ်ခုဟာ အလွန်တင်းကြပ်တဲ့ အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစံနှုန်းတွေနဲ့ ကိုက်ညီရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ စွမ်းရည်နဲ့ခံနိုင်ရည်တွေဟာ မြင့်မားတဲ့ စံသတ်မှတ်ချက်မှာရှိတာကြောင့် ကြာရှည်တဲ့ Charge-discharge သံသရာဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာလည်း တည်ငြိမ်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပေးအပ်နိုင်ပါတယ်။ OPPO ကတော့ Charge-discharge ကို အကြိမ်ပေါင်း ၈၀၀ အထိ စမ်းသပ်ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
လက်ရှိအခြေအနေမှာ Type-C တွေဟာ ယေဘုယျအားဖြင့် 5A အထိပဲ ထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် OPPO ကတော့ တည်ငြိမ်တဲ့ 6.5A အားသွင်းနှုန်းအထိ ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ အားသွင်းအစိတ်အပိုင်းတွေကို အလွန်မြင့်မားတဲ့ သတ်မှတ်ချက်ထိရောက်အောင် စိတ်တိုင်းကျပြုပြင်ပြီး ဆားကစ်ကို လိုက်လျောညီထွေစွာ ဖြတ်သန်းနိုင်စေခြင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးဖြစ်ပါတယ်။
မြန်နှုန်းဟာ ပန်းတိုင်ဖြစ်ပေမယ့် လုံခြုံစိတ်ချရမှုဟာ အခြေခံအချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကို OPPO ကယုံကြည်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် VOOC Flash Charge စနစ်မှာ ကာကွယ်မှုအဆင့် ငါးဆင့်ထည့်သွင်းပေးထားတာကို တွေ့မြင်ရပါတယ်။ Charging, adapter, cable, mobile နဲ့ ဘက်ထရီ တွေရဲ့ Node တိုင်းမှာ ကိုယ်ပိုင် Protection chipset တွေကိုယ်စီနဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗို့အားနဲ့ လျှပ်စီးကြောင်းဟာ လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ အကွာအဝေးမှာရှိ၊ မရှိကို စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးပေးနေတာပါ။ အကယ်၍ ပုံမှန်မဟုတ်တာတွေ့ရင် ချက်ချင်းဆိုသလို ရပ်တန့်ပစ်လိုက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
“လွယ်လွယ်နဲ့တော့ စံပယ်မပွင့်ဘူး” ဆိုတဲ့ ဆိုရိုးလေးရှိပါတယ်။ ဒီအတိုင်းပါပဲ။ ဒီနေ့ဈေးကွက်ထဲမှာ အားသွင်းမြန်တဲ့ OPPO ရဲ့ 65W Super VOOC 2.0 ကလည်း နှစ်အတော်ကြာပြီးမှ ဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တုန်းက VOOC Flash Charge ဆိုပြီး အစပြုခဲ့ရပါတယ်။ ၅ မိနစ်အားသွင်း ၂ နာရီဖုန်းပြော ဆိုတဲ့ဆောင်ပုဒ်လေးကို မှတ်မိကြဦးမယ်ထင်ပါတယ်။
ဒီနောက် ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာတော့ 50W Super VOOC ကို OPPO Find X Automobili Lamborghini Edition နဲ့အတူစတင်ပြီး မိတ်ဆက်လာပါပြီ။ ၂၀၁၉ မှာတော့ 65W Super VOOC 2.0 ကို OPPO Reno Ace မှာ စတင် မိတ်ဆက်လာတာပါ။ “၅ မိနစ်အားသွင်း၊ ၂ နာရီ ဂိမ်းကစား” ဆိုတဲ့အဆင့်အထိ ရောက်ရှိသွားပါပြီ။ အခု OPPO Reno4 Pro မှာလည်း ဒီနည်းပညာကို ထည့်သွင်းပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အားသွင်းရင်းနဲ့ပဲ အချိန်ကုန်နေတော့မှာလား ?
ဒီမေးခွန်းက ဒီနေ့ခေတ်စမတ်ဖုန်းလောကမှာ ကျယ်ကျယ်လောင်လောင်မေးတဲ့မေးခွန်းဖြစ်သလို၊ သုံးစွဲသူတွေကလည်း ဆာဆာလောင်လောင် တမ်းတရတဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်။ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး နယ်ပယ်စုံက လူတန်းစားမျိုးစုံအတွက် အချိန်ဟာရွှေထက် တန်ဖိုးကြီးနေပါပြီ။
တစ်ဖက်ကကြည့်ပြန်ရင်လည်း စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးဟာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ နေ့စဉ်ဘဝမှာ အရေးပါတဲ့အထောက်အကူပြု ကိရိယာတစ်ခု ဖြစ်နေပါပြီ။ ကျန်းမာရေးကအစ၊ ဖျော်ဖြေရေးအဆုံး၊ အခြားကဏ္ဍပေါင်းစုံမှာ စမတ်ဖုန်းရဲ့ ပါဝင်ပတ်သက်မှုက ကြီးမားတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် နေရာယူထားပါပြီ။ ဒီလိုဘက်စုံသုံးနိုင်တဲ့ အကောင်းစားစမတ်ဖုန်းတစ်လုံးအတွက် ဘက်ထရီမရှိရင် အသက်မရှိသလိုပါပဲ။ ဒီအတွက် အရည်အသွေးကောင်းပြီး စွမ်းဆောင်ရည်ပြည့်တဲ့ ဘက်ထရီလည်း လိုအပ်သလို၊ အချိန်တိုအတွင်း အားသွင်းနိုင်တဲ့ နည်းပညာထောက်ပံ့မှုကလည်း လိုအပ်ပါတယ်။
ဖုန်းတစ်လုံးမှာ ဘက်ထရီအားကုန်တာက ရှောင်လွှဲလို့မရတဲ့ ကိစ္စပါ။ ဒါပေမယ့် အားအမြန်သွင်းနိုင်တာဟာ အချိန်ကို ချွေတာရာရောက်သလို၊ တန်းတူချင်းယှဉ်ရင်တောင် ခြေတစ်လှမ်းပိုရောက်စေတယ်ဆိုတာကို ငြင်းလို့မရပါဘူး။ (Gamer တွေပိုသိမယ်ထင်ပါတယ်) ဒီအချက်က OPPO Reno4 Pro ကို အခြားအရာတွေထက် ပိုပြီးထင်ပေါ်စေမယ့် အချက်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးပြောချင်တာက OPPO ရဲ့ ရည်မှန်းချက်က 65W နဲ့တင် ရပ်တန့်သွားဦးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အခုဆိုရင် 125W Flash Charge Technology ကိုလည်း မိတ်ဆက်ထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသတင်းကောင်းကို မျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့မြင်ရဖို့ အကြာကြီးမစောင့်ရတော့ဘူးလို့လည်း ယုံကြည်ရပါတယ်။ OPPO Reno4 Pro ကို ‘မှောင်မိုက်သောညအချိန်တွင် လင်းလက်တောက်ပနေသော ကြယ်များ၏ အသွင်ကိုဖော်ဆောင်ပေးသည့် Starry Night အရောင်’ နဲ့ ‘ဖြူစင်နူးညံ့တောက်ပြောင်သည့် Silky White အရောင်’ ဆိုတဲ့ ရောင်ပြေး (၂) ရောင်ကို ရွေးချယ်နိုင်ပြီး မြန်မာငွေ ၆၉၉,၉၀၀ ကျပ်ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
MyTech Myanmar2020-09-19T16:40:47+06:30September 19th, 2020|Mobile Phones, News, Oppo|